Nepal Deep | छाया सरकार बलियो नभई प्रतिपक्ष बलियो हुदैन: दिव्यमणि राजभण्डारी
छाया सरकार बलियो नभई प्रतिपक्ष बलियो हुदैन: दिव्यमणि राजभण्डारी
शनिबार, पुष ४ २०७७
काठमाडौँ। वरिष्ठ उद्योगी व्यवसायी एवं नेपाली कांग्रेसतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले छाया सरकारको प्रभावकारिता बारे प्रश्न उठाउनु भएको छ। बेलामौकामा छाया सरकार प्रभावकारी नभएको भनेर आवाज उठाउदै आउनु भएका भण्डारीले कांग्रेसले शुक्रबार बोलाएको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकमा पनि त्यसबारे आफ्नो विचार प्रकट गर्नु भएको थियो।
छाया सरकारमा हुनेहरु जिम्मेवार भएमात्र प्रतिपक्षीको रुपमा काँग्रेसले खेल्ने भूमिका शसक्त हुने राजभण्डारीको ठमम्याइ रहेछ। छाया सरकार असफल भए स्वतः प्रतिपक्ष पनि कमजोर हुने अर्थात् छाया सरकार बलियो नभई प्रतिपक्ष बलियो हुदैन भन्ने उहाँको आशय रहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा छाया सरकारको प्रभावकारिता, अन्तराष्ट्रिय प्रचलनसँगै समसामयिक विषयमा सांसद राजभण्डारीसँग नेपालदीपका तर्फबाट विशाल पौडेलले गरेको संक्षिप्त टेलिफोन कुराकानी :
छाया सरकारबारे तपाईको धारणा के हो?
मुख्यत: छाया सरकार बलियो हुनुपर्यो। सरकारमा रहेका सदस्यहरु जो छन् उनीहरु जिम्मेवार हुनुपर्यो। आज जो छाया मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ कांग्रेसको सरकार आएपछि सम्बन्धित मन्त्री हुने पनि उहाँहरु नै हो। अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यहि हो। ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छाया मन्त्री भनेको मिनिस्टर इन वैटिङ्ग हुन्। यसरी लामो सोच राखेर छाया सरकार बनाइएको छ। छाया सरकारमा जो जो हुनुहुन्छ क्रियाशील हुनुपर्यो।
छाया सरकारको बनोटमा समस्या छ कि व्यक्तिहरुमा?
दुबैमा। यहाँ के भयो भने नेपाल सरकारमा लगभग २०-२५ जना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। तर छाया मन्त्री मण्डलमा भने एक जनाको अन्डरमा २-३ जना अरु सहयोगीहरु राखिएको छ। जसले छाया सरकारको मर्ममा नै आघात गर्दछ। संविधानले मन्त्रीमण्डलमा लिमिटेसन राखे जस्तै छाया सरकारमा पनि लिमिटेसन हुनुपर्छ।
जहाँ सम्म अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको कुरा छ, छाया मन्त्रीहरुले उठाएका कुराहरुको जवाफ सम्बन्धित वहालवाला मन्त्रीले दिनैपर्ने हुन्छ। तर यहाँ न त सरकार क्रियाशील छ न छाया सरकार नै।
छाया मन्त्री बन्ने आकांक्षा हो की?
म अन्तराष्ट्रिय व्यापारबाट रिटायर्ड भएर राजनीतिमा लागेको मान्छे। छाया मन्त्री बन्नको लागि केहि मापदण्ड छन्। ति मापदण्डहरुको कसीमा म छाया मन्त्री बन्न मिल्दैन।
मेरो एक मात्र चाहना भनौं स्वार्थ भनौं के हो भने संसदीय दलको नियमावली अनुरुप चल्नुपर्यो।
संसद नै नचलेको अवस्थामा छाया सरकारबाट कस्तो क्रियाशीलता अपेक्षा गर्नु भएको?
छाया सरकारको नियमित मिटिंग हुनुपर्यो। कुन विषय उठाउने, कुन विषयलाई महत्व दिने भन्नेबारे सल्लाह गर्नु पर्यो। त्यसको लागि को सँग सहयोग लिनुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो। आफ्नो जिम्मेवारीको, आफ्नो फिल्डको ज्ञान मन्त्रीमा हुनुपर्यो। छाया सरकार मजभुत भयो भने प्रतिपक्षीको भूमिका मजबुत हुने हो।
संसदमा बोल्ने मात्र छाया मन्त्रीहरुको दायित्व होइन। अवश्य संसदमा मन्त्रीहरु बोल्नु पर्छ तर त्यतिमा मात्रै सिमित हुनु भएन। महत्वपूर्ण कुरा त मन्त्रीहरुलाई आफ्नो दायित्वबोध हुनु पर्यो। हामी जनताको लागि आएका हौं भन्ने हुनुपर्यो। हामीले आफ्ना सबै व्यक्तिगत कामहरु पन्छाएर यो समय देश र जनताको लागि छुट्टयाउनु पर्यो। हामी त्यसैको लागि चुनिएर आएको हो।
प्रतिपक्षको दायित्व पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो। त्यो काम जसरी हुन्छ गर्नु पर्यो, इमान्दारीका साथ। संसद नचलेको अवस्थामा पनि अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ। फेसबुक छ, ट्विटर छ। यस्ता माध्यमहरुबाट पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। संसदको पदको गरिमा राख्न सकिदैन, अरु नै काम छ भने संसद बन्नु भएन। मेरो कुरा यही हो।
कांग्रेसले सरकार विरुद्द आन्दोलन गर्यो। तर सामाजिक सञ्जालहरुमा जनताको पिडामा मौन रहेको कांग्रेस आफ्नो नेताको लागि भने एकाएक सडकमा आयो भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि?
जनताले हामीलाई २९ गतेको आन्दोलनमा भरपुर साथ दिएका छन्। समस्याहरु थिए। हामीले पनि केहि न केहि गर्नु पर्छ भनिरहेका थियौं। जनतामा आक्रोश बढी रहेको थियो। त्यो निस्कनको लागि एउटा बहाना चाहिएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल माथिको दमनको घटना आन्दोलनको लागि तत्कालिन कारण बन्न मात्र पुगेको हो। हामीले आन्दोलनमा पौडेलको बारेमा मात्र त नारा लगायनौं। हामीले जनताका दिन दैनिकीका कुरा उठायौं। कोभिड महामारीमा सरकारको कमजोर डेलिभरीको बारे कुरा उठायौं।
आगामी दिनमा काँग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ?
अहिले कांग्रेसले आवाज उठाउन सकेन भनेर जनताले दोषारोपण गरिरहेका छन्। उनीहरुले दिएको जिम्मेवारी अर्थात् मजबुत प्रतिपक्ष बन्ने कुरामा हामी चुकेका छौं। त्यसैले हामीले यसलाई शिक्षाको रुपमा लिएर अगाडी बढ्नु पर्छ।
हिजोको संसदीय दलको बैठकमा भएको छलफललाई आधार मान्दा संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउबा यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। र, केहि दिनमै शसक्त रुपमा ठोस कार्यक्रम सहित कांग्रेस अगाडी आउने छ भन्नेमा विश्वस्त छु। सम्भवत: संसद अधिवेशन माग गर्न उहाँले अगुवाइ लिनु हुने छ।
कोभिड महामारीमा सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो?
सरकारले कोरोनाको भ्याक्सिन किन्ने बारे प्लान नै छैन। बुक गरे न आफ्नो पालोमा समान पाइने हो। तर सरकार छलफल मात्र गरिरहेका छौं भन्छ। सरकार कोरोना व्यवस्थापनमा पूर्णत असफल देखियो।